Ndekọ okpomọkụ Antarctic na 18.3ºC. Ahụtụbeghị tupu | Network Meteorology
Dekọọ okpomọkụ na Antarctica
Ihu igwe ugbu a nke ụwa na-ara ara. Ma ọ bụ na oge ọkọchị a na-emepụta ikuku okpomọkụ na oke okpomọkụ gburugburu ụwa. Nkowa ya na mbido ihe ndia nile sitere na okpomoku nke uwa nke mmadu meputara. Ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị edere na Antarctica afọ gara aga dekọtara 18.3C. Edere okpomọkụ ahụ maka February 6, 2020, dịka UN World Meteorological Organisation.
Maka nke a, anyị ga - arara edemede a ka ịgwa gị ihe bụ ihe kpatara ọnọdụ okpomọkụ Antarctica ji erute ọkwa akụkọ ihe mere eme.
1 Ndekọ okpomọkụ Antarctic
2 Ebu belt na atụmatụ
3 Antarctic okpomọkụ dị elu
4 Ihe si na ya pụta
Ndekọ okpomọkụ Antarctic
Buru n'uche na n'oge ọnwa nke ọnwa Febụwarị na mpaghara ndịda ọ bụ oge ọkọchị. Maka nke a, a na - edebanye aha oge kachasị elu nke afọ niile n'oge a, nke abụrụla ọnwa kachasị oyi n'afọ. Enwere nsogbu zuru ụwa ọnụ karịa ọrịa na-efe efe nke Covid-19 mepụtara, nke bụ okpomoku zuru ụwa ọnụ. Enweghị ọgwụ mgbochi maka ụdị ọrịa a.
O doro anya na mmadụ amalitelarị usoro nke mgbanwe zuru ụwa ọnụ na-enweghị nloghachi. A dọọlarịrị aka na ntị na mgbe okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-erute ihe na-adịghị mma, a gaghị eweghachite maka mmetụta ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe. Umu anwuru nke Greenhouse n’onu mmadu n’abia n’iru n’abia n'agbanyeghị mbọ na ogbugba ndu nke nkwekọrịta Paris.
Tụle ihe ndekọ nke ọnọdụ okpomọkụ Antarctic na-enyere anyị aka ịmepụta ihe osise nke ihu igwe na ihu igwe n'otu n'ime ókèala ikpeazụ nke ụwa anyị. Iji chọpụta ihe kpatara Antarctica ji bụrụ otu n’ime mpaghara na-ekpo ọkụ nke ụwa, anyị ga-agarịrị eriri ebu ya.
Ebu belt na atụmatụ
E nwere usoro ikuku thermohaline dị nwayọ nwayọ, nke ikuku na-anaghị ebugharị, kama site na ikesa ọkụ na ọdịda na oke osimiri. A na-akpọ ụdị okirikiri a belt ebufe. Ihu ọma na ọ bụ a mmiri ugboelu nke a nnukwu ego nke mmiri ọkụ na-ekesa kwupụta North osisi, nke dị ka okpomọkụ na-adaba ọ na-adịkwu nnu na ok. Mmụba a na njupụta na - eme ka aru mmiri mikpuo ma lọgharia na mpaghara ala ala. Mgbe ha rutere n’Oké Osimiri Pasifik, ha na-ekpo ọkụ ọzọ ma njupụta ha na-ebelata, ha na-alaghachi n’elu ala.
Ọfọn, na mpaghara ebe ozu mmiri na-eloda n'ihi na ha na-atụ oyi ma na-agba, a hụbeghị ice ọ bụla kemgbe 1998. Nke a na-eme ka eriri ebu ebu kwụsị ọrụ, na-eme ka mmiri ahụ dị jụụ obere. Uru nke a nwere ike inye bụ na, na njedebe nke narị afọ, United Kingdom, Ireland, Iceland na ụsọ oké osimiri France na Norway (na mgbakwunye na northwest nke Spain) Ha ga - ebili naanị 2 Celsius C, ma e jiri ya tụnyere 4 Celsius dị egwu n'ọtụtụ mpaghara Europe. Nke a bụ ozi ọma maka ugwu ọdịda anyanwụ Europe, mana ọ bụghị maka America nke ebe okpomọkụ, n'ihi na ọnwụ nke ugbu a ga-eme ka okpomoku mmiri Atlantic dị na mpaghara ahụ, yana, n'ihi ya, ike nke ajọ ifufe.
Antarctic okpomọkụ dị elu
Anyi aghaghi iburu n’uche na Antarctica bu kọntinent juru oyi. Ọ bụ otu n'ime igwe jụrụ oyi nke ụwa niile. Na okpomoku na-arị elu, a na-atụ anya mgbaze agbaze pola na oke osimiri. N'ikwekọ na mgbanwe ihu igwe, ọ bụ mpaghara ụwa dum na-ekpo ọkụ karịa. N’etiti Eprel, emere akụkọ sitere na thetù Na-ahụ Maka Ihuigwe na Worldwa wee gosi na 2020 bụ afọ nke atọ kachasị mma n’akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na e nwere ndekọ, n’azụ 2016 na 2019. Ogologo okpomọkụ dị na afọ ndị a bụ ọkwa 1.2 Celsius karịa ọkwa mgbanwe tupu nrụpụta ụlọ ọrụ.
Na mgbakwunye, n'ime afọ iri gara aga ka ndekọ ndekọ okpomọkụ niile gara aga. Dabere na otu a na ndị ọka mmụta sayensị na-eme ya, ọnụọgụ ikuku gas na ikuku na-aga n'ihu na-arị elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na gas ndị a na-ejigide okpomọkụ na-anọgide na-ebili, ọnọdụ okpomọkụ ga-aga n'ihu ịrị elu.
Nsonaazụ ọzọ nke ịrị elu okpomọkụ na Antarctica bụ oke osimiri. Ọ bụ usoro nke mego ngwa ngwa ọbụlagodi ọnwa ndị gara aga. N'ihi mbibi ọzọ nke Greenland na Antarctic glaciers, oke osimiri ebilila. N'otu oge ahụ, ihe ndị e kere eke na mmiri na-aga n'ihu na-ata oke ahụhụ acidification na deoxygenation nke oke osimiri.
Ka ọ dị ugbu a, nnyocha e bipụtara na May na akwụkwọ akụkọ Nature Geoscience dọrọ aka ná ntị na ịgbaze ice na Antarctica na-eyi egwu mmeghari olu na usoro ihu igwe.
Na Arctic, ọnọdụ ahụ abụghị ihe ọzọ. Ihe ka ọtụtụ n’ime ya bụ oké osimiri, ebe Antarctica gbara ala gburugburu. Nke a na-eme ka omume dị n’ihu ihu igwe dị iche. Ọ bụ ezie na mmiri mmiri na-ese n’elu mmiri agbaze, o nweghi mmetụta ọ bụla na ịrị elu oke osimiri. Nke a abụghị maka ugwu glaciers ma ọ bụ glaci glaci.
Ihe omuma ohuru banyere agbaze nke ogwe a na-egosi na enwere otu nnukwu glaciers na Antarctica, nke ana akpo Tito Glacier, nke na-agbaze n'ihi oke mmiri nke oké osimiri. Ọ furu efu ọtụtụ ice na ịrị elu na oke osimiri ga-ahụwanye nke ọma. NASA kwuputara na ọ dị ka anyị eruola ebe oke pola bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe.
Maka ọtụtụ usoro anyị na-arụ ọrụ na maka ọtụtụ usoro megide mgbanwe ihu igwe anyị na-eme, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị mgbaze nke oghere ice polar.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndekọ okpomọkụ Antarctic na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Dekọọ okpomọkụ na Antarctica
Pyrocumulonimbus na ebili mmiri na Canada